တိုင်းတာခြင်းသည်သင်၏ဖြေဆိုသူသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောသည်ထံမှထင်နှင့်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို inferring အကြောင်းပါ။
ကျနော်တို့ဖြေဆိုသူကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းများပေးသောအဖြေကနေအခြအောင်ဘယ်လို: ကိုယ်စားပြုမှု၏ပြဿနာများအပြင်, စုစုပေါင်းစစ်တမ်းအမှားမူဘောင်အမှားအယွင်းများ၏ဒုတိယအဓိကအရင်းအမြစ်တိုင်းတာခြင်းကြောင်းပြသထားတယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့ကိုလက်ခံရရှိအဖြေနှင့်ကျွန်တော်လုပ်ထို့ကြောင့်အခြ, ပြင်းထန်စွာ-နှင့်မူတည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အံ့သြစရာနည်းလမ်းတွေ-on ကိုကျွန်တော်မမေးအတိအကျဘယ်လိုနိုင်သည်ကိုထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘာမျှ-Norman Bradburn, Seymour Sudman နှင့်ဘရိုင်ယန် Wansink နေဖြင့်မေးခွန်းများမေးအံ့ဖှယျစာအုပ်ထဲတွင်ဟာသထက်ပိုကောင်းဤအရေးကြီးသောအချက်သရုပ်ဖော် (2004) :
ဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဟာသအပြင်စစ်တမ်းသုတေသီများသင်သည်အဘယ်သို့သင်ယူသင်မေးဘယ်လိုပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းများစွာကိုစနစ်တကျနည်းလမ်းတွေမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့ဒီဟာသရဲ့အမြစ်မှာအလွန်ပြဿနာစစ်တမ်းသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်နာမည်တစ်ခုရှိပါတယ်: ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပုံစံသက်ရောက်မှု (Kalton and Schuman 1982) ။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပုံစံသက်ရောက်မှုကိုမှန်ကန်စစ်တမ်းများ impact စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုကြည့်ဖို့အဲဒီနှစ်ခုအလွန်ဆင်တူ-ရှာဖွေနေစစ်တမ်းမေးခွန်းများကိုစဉ်းစားပါ:
နှစ်ဦးစလုံးမေးခွန်းများကိုအတူတူပါပဲတိုင်းတာရန်ပေါ်လာသော်လည်း, သူတို့သည်အမှန်တကယ်စစ်တမ်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ် (Schuman and Presser 1996) ။ တလမ်းတည်းဟုမေးသောအခါ, ဖြေဆိုသူ 60 ခန့်% တစ်ဦးချင်းစီရာဇဝတ်မှုများအတွက်အပြစ်တင်ဖို့ပိုခဲ့ကြပေမယ့်အခြားလမ်းဟုမေးသောအခါအကြောင်းကို 60% လူမှုရေးအခြေအနေများ (ပုံ 3.3) အပြစ်တင်ဖို့ပိုခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် တစ်နည်းအားဖြင့်အဲဒီမေးခွန်းနှစ်ခုအကြားသေးငယ်တဲ့ခြားနားချက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနိဂုံးချုပ်ဖို့သုတေသီများဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။
သုတေသီများသူတို့မေးခွန်းမေးခဲ့တယ်အတိအကျဘယ်လိုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအဖြေကိုရနိုင်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းစစ်တမ်းတစ်ခုစမ်းသပ်မှုကနေရလာဒ်: 3.3 ပုံ။ ဖြေဆိုသူတစ်ဦးကအများစုတစ်ဦးချင်းစီရာဇဝတ်မှုများနှင့်မတရားမှုအဘို့လူမှုရေးအခြေအနေများထက်အပြစ်တင်ဖို့ပိုဖြစ်ကြောင်းသဘောတူခဲ့ကြသည်။ နှင့်ဖြေဆိုသူအများစုဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့သဘောတူညီခဲ့: လူမှုရေးအခြေအနေများတစ်ဦးချင်းစီထက် ပို. တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်း။ ကနေအဆင်ပြေအောင် Schuman and Presser (1996) , စားပွဲပေါ်မှာ 8.1 ။
မေးခွန်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြင်, ဖြေဆိုသူလည်းအသုံးပြုတဲ့တိကျတဲ့စကားများပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောအဖြေကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အစိုးရမဟုတ်သောဦးစားပေးအကြောင်းကိုထင်မြင်ချက်များကိုတိုင်းတာနိုင်ရန်အတွက်, ဖြေဆိုသူအောက်ပါ prompt ကိုဖတျရှုခဲ့ကြ:
ထို့နောက်ဖြေဆိုသူထက်ဝက် "သက်သာချောင်ချိရေး" နှင့်တစ်ဝက်အကြောင်းမေးခဲ့ကြသည်အကြောင်းမေးခံခဲ့ရဤကဲ့သို့သောတူညီသောအရာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစာပိုဒ်တိုများထင်နေစဉ်တွင်, သူတို့ကအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကို (ပုံ 3.4) ရူးနှမ်း "ဟုအဆိုပါဆင်းရဲသားများအတွက်အကူအညီ။ "; အမေရိကန်တွေ "သက်သာချောင်ချိရေး" ထက်ပိုပြီးထောက်ခံ "ဆင်းရဲသောသူတို့အားအကူအညီ" ၏ဖြစ်ခြင်းသတင်းပို့ (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber and Paris 2013) ။
3.4 ပုံ: "။ သက်သာချောင်ချိရေး" သုတေသီများလက်ခံရယူသောအဖြေကိုသူတို့သုံးအတိအကျရသောစကားလုံးများအပေါ်မူတည်မထွက်ရဖြေဆိုသူပိုပြီးထောက်ခံ "ဆင်းရဲသောသူတို့အားအကူအညီ" ၏ထက်ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းစစ်တမ်းတစ်ခုစမ်းသပ်ချက်ကနေရလာဒ်ဒါကမေးခွန်းတစ်ခုအသုံးအနှုန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ၎င်းတို့၏မေးခွန်းများကို။ ကနေအဆင်ပြေအောင် Huber and Paris (2013) , စားပွဲပေါ်မှာ A1 ။
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပုံစံဆိုးကျိုးများနှင့်အသုံးအနှုန်းဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုဤဥပမာကိုပြသသည့်အတိုင်းသုတေသီများလက်ခံရယူသောအဖြေကိုသူတို့မေးခွန်းတွေမေးပုံကိုကလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ ဤဥပမာတခါတရံသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းမေးခွန်းများမေးရန် "မှန်ကန်သော" လမ်းအကြောင်းကိုတွေးမိမှသုတေသီများဦးဆောင်လမ်းပြ။ ကျွန်မမေးခွန်းတစ်ခုမေးရန်အချို့သောရှင်းလင်းစွာမှားယွင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်စဉ်းစားနေတုန်းတဦးတည်းတစ်ခုတည်းမှန်ကန်သောလမ်းစဉ်အမြဲရှိမထင်ကြဘူး။ ဒါကြောင့် "သက်သာချောင်ချိရေး" သို့မဟုတ် "သူသည်ဆင်းရဲသားတို့အတွက်အကူအညီပေးရေး" အကြောင်းကိုမေးရန်သိသာပိုကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်၏ ဤအဖြေဆိုသူ '' သဘောထားများနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုတိုင်းတာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ ဤဥပမာသည်လည်းတခါတရံတွင်စစ်တမ်းများအသုံးမပြုသင့်ကြောင်းကောက်ချက်ချသုတေသီများဦးဆောင်လမ်းပြ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တစ်ခါတစ်ရံမျှမရှေးခယျြမှုလည်းမရှိ။ အဲဒီအစားဒီဥပမာထဲကနေဆွဲခွင့်သင်ခန်းစာကျနော်တို့ဂရုတစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းများကိုတည်ဆောက်သင့်ပါတယ်ကျနော်တို့ဝင်လာတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံမထားသင့်ကြောင်းစဉ်းစားပါ။
အများစုမှာကွန်ကရိ, ဤသူသည်သင်တို့တစ်စုံတစ်ဦးကစုဆောင်းစစ်တမ်း data တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာလျှင်, သင်အမှန်တကယ်မေးခွန်းလွှာကိုဖတ်ပြီသေချာအောင်ဆိုလိုသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းလွှာအတွက်လျှင်, လေးအကြံပြုချက်များရှိသည်။ ပထမဦးစွာငါသည်သင်တို့မေးခွန်းလွှာဒီဇိုင်း (ဥပမာအကြောင်းပိုမိုဖတျရှုအကြံပြု Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ); ငါကဒီမှာကိုဖော်ပြရန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးထက်ဤပိုပြီးလည်းမရှိ။ ဒုတိယအနေသင်တို့ကိုငါအရည်အသွေးမြင့်စစ်တမ်းများကနေစကားလုံး-မေးခွန်းများကိုများအတွက်-စကားလုံးကူးယူကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သင်သည်သူတို့၏ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေးအကြောင်းကိုဖြေဆိုသူကိုမေးချင်လျှင်ဥပမာ, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသန်းခေါင်စာရင်းအဖြစ်အကြီးစားအစိုးရစစ်တမ်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်သောမေးခွန်းများကိုကူးယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီ plagiarism ကဲ့သို့မြည်ပေမဲ့, ကူးယူမေးခွန်းများကို (နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်မူရင်းစစ်တမ်းကိုကိုးကားပြီးကဲ့သို့) စစ်တမ်းသုတေသနအတွက်အားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်စစ်တမ်းများကနေမေးခှနျးတှေကိုကူးယူပါကသင်သည်သူတို့စမျးသပျခဲ့ကြကြောင်းသေချာပါစေနိုင်ပြီး, အချို့ကိုသင်ကအခြားစစ်တမ်းများကနေတုံ့ပြန်မှုရန်သင့်စစ်တမ်းဖို့တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မေးခွန်းလွှာအရေးကြီးသောဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအသုံးအနှုန်းသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပုံစံသက်ရောက်မှုဆံ့မယ်ထင်လျှင်တတိယ, သင်တို့ကိုထက်ဝက်ဖြေဆိုသူမေးခွန်းများထဲမှဗားရှင်းခံယူခြင်းနှင့်တစ်ဝက်အခြား version ကိုလက်ခံရရှိဘယ်မှာစစ်တမ်းတစ်ခုစမ်းသပ်ချက်ကို run နိုင် (Krosnick 2011) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါသင်သည်သင်၏ frame ကိုလူဦးရေထဲကနေတခြို့လူနှင့်သင်၏မေးခွန်းများကိုရှေ့ပြေး-စမ်းသပ်ရန်ကြောင်းအကြံပြု; စစ်တမ်းသုတေသီများဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို pre-စမ်းသပ်မခေါ် (Presser et al. 2004) ။ ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံစစ်တမ်း pre-စမ်းသပ်ခြင်းအလွန်အမင်းအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။